Gandaki Sanchar » योजना माग्दा जाँदा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने – मलाई प्रमुख अतिथि नबनाउने, योजना मात्रै माग्‍ने ?
योजना माग्दा जाँदा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने – मलाई प्रमुख अतिथि नबनाउने, योजना मात्रै माग्‍ने ?
असोज १८, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले योजना माग्‍ने सांसदलाई आफूलाई प्रमुख अतिथि किन नबनाएको भन्‍ने प्रश्न गरेका छन् । यतिमात्रै होइन, कार्यक्रम नगर्ने र चिफ गेस्टका रुपमा आफूलाई नबोलाउने अनि योजनामात्रै माग्ने भन्दै सांसदलाई जवाफसमेत फर्काउने गरेका छन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा स्याङ्जाका प्रदेशसभा सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले मन्त्री लम्सालमाथि यो आरोप लगाएका हुन् । प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले भने, “अब त जनताले न्याय पाउँछन भन्ने विश्वास सबैतिर छाएको थियो । तर, अहिले त फेरि सामन्तहरू नयाँ राजा र राणाकालमा जस्तै, आफूलाई जी हजुरी गर्ने, सधैं आफ्नो वरिपरि घुमिरहोस् भन्‍ने चाहना नेतृत्ववर्गमा पलाउन थालेको जस्तो देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै प्रदेशका उद्योग, पर्यटनमन्त्रीज्यूले देखाइरहनुभएको छ । उहाँमा जनताहरूमा आफ्नो अधिकार, आवश्यकता विकास निर्माण खोज्दै उहाँकोमा पुग्दा उहाँले त भन्न थाल्नुभएको छ, तपाईहरूले मलाई चिफ गेस्ट बनाउँदै बनाउनुहुन्न । मलाई तपाइहरूको क्षेत्रमा बोलाउँदै बोलाउनुहुन्न । योजना मागेर मात्रै पाइन्छ ?” सांसद श्रेष्ठले मन्त्रीको कार्यशैलीले संघीयता र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको बताए ।
“तपाईंले हामीकहाँ आएर हामीलाई सेवा गर्न पर्छ भन्ने भाव प्रकट गर्नुभएको छ । यही हो लोकतन्त्र रु संघीयता ? जनताको अधिकार भन्ने मलाई कहाँकहाँ शंका लाग्न थालेको छ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र कसैलाई सामन्त बन्नलाई र कसैले पुर्खाको जस्तो आफूलाई सधैं सेवामा तल्लीन बनाउन, आफूलाई शासक र जनतालाई सेवक बनाउने खालको भाव प्रकट भएको त होइन? यसले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई नै असफल बनाउनतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयको बेरुजुको प्रसंग, वन पैदावरबाट राजस्व संकलनतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मन्त्री सम्मान खोज्ने र पहुँच देखाउनेतर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप छ । यसले प्रदेश सरकार र प्रदेशका माननीयहरू नै असफल हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, “आफ्नो मन्त्रालयमा छुट्टाइएको परामर्शको नाममा खर्च भएको तीन करोड रकम जो महालेखा परीक्षकले बेरुजुको नाममा देखाइसक्यो रु त्यो कसरी कुन शीर्षकमा खर्च भएको हो रु भन्ने कुरा सदनमा बहुलट्ठक तरिकाले गराउने जुन राष्टको सम्पत्ति बनाउन वन पैदावरमा राजस्व संकलन गर्नतर्फ ध्यान नदिने अनि मन्त्रीचाहिँ कहाँ आफूलाई सम्मान गर्छ रु मेरो पहुँच देखाउन पाइन्छ भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिँदा प्रदेश सरकार नै असफल हुने हो कि रु हामी प्रदेश सरकारका माननीयहरू नै असफल हुने हो कि मलाई डर लागेको छ ।”
चाडपर्व नजिकिँदा बजारमा पाइने मालसामानमा भएको कालोबजारी, उपभोक्ता ठग्न म्याद गुज्रेका सामग्रीमा नयाँ मूल्य, उत्पादन मिति राखिएकातर्फ अनुगमन गर्नुको सट्टा आफ्नो सत्ता जोगाउन र सम्मान खोज्नेतर्फ ध्यान दिएको आरोप लगाए ।
जनता रोग, भोकबाट पीडित हुँदा मन्त्री भने आफूलाई ऐस आराम र पदको घमण्ड देखाएर गाउँ घुम्न फुर्सद नभएको आरोप लगाए । जनतालाई यसबाट जोगाउन र गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउन बेलैमा सोचोस् । राष्टियताको ठूलो ढ्वाङ रची जनतालाई विकास निर्माणका पपुलर योजना बाँड्ने तर काम भने नगर्ने, यसअघिका सरकारले ल्याएका क्रमागत योजनाको शिलान्यास गर्ने र हाम्रो सरकारले ल्याएको हो भनेर जनतालाई ढाँट्न थालिएको उनको आरोप छ ।
उनले जनकपुरको रेलमार्गको पनि चर्चा गरे । राणाकालीन रेललाई ओलीले आफूले नै ल्याएको भनेर प्रचार गरेको । ओलीले चुनावको बेलामा पोखरामा रेल आउने भने पनि त्यो भने नगरेको डीपीआरको पनि कुनै पहल नभएको आरोप लगाउँदे उनले भने, केन्द्रीय सरकारले पनि झुटो कुरा नभनोस् । ११ र १२ कक्षाको पाठ्यक्रममा छापिएको नक्सा रोक्ने र आफूलाई महान राष्ट्रवादी देखाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले के कारणले रोकियो त्यसबारे उनले जवाफ पनि माग गरे । छापिएको पुस्तकलाई वितरण गर्न पनि उनले सदनको ध्यानाकर्षण गराए । साभार–१२ खरीवाट
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७७, आईतवार १०:०५